Izingane Ezigawula Izingane Azinazo Izicathulo | Martech Zone
Izingane Ezigawula Izicathulo Azinazo Izicathulo
NgoLwesibili, Januwari 26, 2010 NgoLwesibili, Septhemba 1, 2015 Douglas Karr
Izolo ngihlangane nongoti kwezokukhangisa lapha edolobheni. Bekuwumhlangano omuhle futhi ngikwazise impela impendulo enzima engiyitholile mayelana nendawo yami yenkampani. Ngamafuphi nje, bengibeke isayithi elilodwa le-crappy elilodwa ezinyangeni eziyi-6 ezedlule futhi angikaze ngilishintshe.
Ngaze ngaba nomsebenzi omningi owenziwe ngosizo lukaMark Ballard kusayithi elisha… ngishayisana nemifanekiso emikhulu yeStockphoto. Bekuzoba isimanga - uma ngike ngaba nesikhathi sokukuqedela.
Iqiniso ukuthi, anginaso isiqiniseko sokuthi ngizo naphakade ube nesikhathi sokuwuqeda. Ngakho… ngikhohlisile ngathola itimu emnandi engikwazile ukuyithenga futhi ngiyenza ngendlela oyifisayo ngamahora ambalwa. Kungigcine ngaze ngafika cishe ngo-4 ekuseni namhlanje ekuseni, kepha isiza esisha silula, kuze kube seqophelweni, futhi sinikeza lonke ulwazi umuntu aludingayo mayelana nokuthi luyini Highbridge uyakwenza.
Ngiphule omunye wemithetho yami yokuklama - ngifaka okuqukethwe ngefonti emhlophe ngemuva emnyama. Lokho kwenza kube nzima ukugaya; noma kunjalo, ngikhuluma nge-glitz ngaleli sayithi futhi angigxili kakhulu ekugcinweni kwezivakashi kakhulu. Leli sayithi lekhasi elilodwa lihlukile kakhulu (qiniseka ukuzulazula bese uqhafaza esigabeni sezinsizakalo).
Kuzoba nesigaba sozakwethu maduzane ngoba leyo iningi lecebo lami lebhizinisi. Ngazise ukuthi uyithanda kanjani kuze kube manje, noma kunjalo!
Tags: DK New MediaWordPresssitepress site
I-10 Blogs Yezobuchwepheshe Obungazi Ngayo
I-imeyili ye-HTML + Amathegi we-Alt = Ama-Bagels amaningi athengisiwe